ဒုက္ခသည်များအတွက်နေအိမ်အလုံးငါးထောင် ဆောက်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးနေ။ …
Coral Arakan News‘s photo.
ဒုက္ခသည်များအတွက် နေအိမ် အလုံး ငါးထောင် ဆောက်လုပ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးနေ။
By Thaung Krwe (with Wakker)စစ်တွေ ၊ ၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင်း ]တူရကီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု နာမည်ဖြင့် စီးဝင်လာသော ဘဏ္ဍာငွေများဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဒက္ခသည်များအတွက် အိမ်အလုံးပေါင်း ငါးထောင်အား လာမည့် မိုးရာသီမတိုင်မီ အပြီးဆောက် လုပ်ရန် အတွက် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဘက်မှ တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများက တင်ဒါများခေါ်ယူနေကြောင်းကို ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်း မှ တစ်ဆင့် သိရသည်။
မောင်တော၊ ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦး၊ ရသေ့တောင်၊ မင်းပြား၊ ပေါက်တော၊ ရမ်းဗြဲ ခုနစ် မြို့နယ်တွင် တစ်လုံးလျှင် ကျပ်ငွေ (၂၀.၅)သိန်း တန်ဖိုးကျသင့်သည့် (အမြဲနေ)လုံးချင်းနေအိမ် အလုံးပေါင်း (၄၉၅၉) လုံး နှင့် စစ်တွေ၊ မြေပုံ၊ ကျောက်ဖြူ သုံးမြို့နယ်တွင် တစ်လုံးလျှင် (၃၃.၃)သိန်း ကျသင့်သည့် ဆယ်ခန်းပါ နှစ်လုံးတွဲ တန်းလျားကြီး (၅၈၂) လုံး၊ တစ်လုံးလျှင် (၃.၀၆)သိန်းတန် အိမ်သာများအား မိုးမကျမီ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအား တင်ဒါခေါ်ကာ အလုပ်အပ်နေသည် ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး နှင့် ပတ်သက်သူ တစ်ဦးက Coral Arakan အား ပြော ကြားသည်။
တူရကီနိုင်ငံအခြေစိုက် Turlish International Cooperation and Development Agency (TIKA) ၊ခေါ်၊ တူရကီနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီ က အဆိုပါ အဆောက်အအုံများကို ဆောက်လုပ်ပေးလိုကြောင်း Coral Arakan က ရရှိသည့် ရုံးတွင်းစာတစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရရှိသော စာရင်းဇယားများအရ အဆိုပါလုံးချင်းအိမ်များ အရေအတွက်၏ တစ်ဝက်နီးပါးတို့အား ပေါက်တောမြို့နယ်တွင် ဆောက်လုပ်မည် ဖြစ်သည်။ အတည်မပြုနိုင်သော အတွင်းသတင်းတစ်ရပ်အရ အဆိုပါ အိမ်လုံးအရေအတွက် (၄၉၅၉)၏ အားလုံးနီးကပါးမှာ ဒုက္ခသည်များအတွက်ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ မူဆလင်နိုင်ငံများ နှင့် မြန်မာ(ပြည်ထောင်စု)အစိုးရ တို့၏ ပါးစပ်က ရခိုင်တိုင်းရင်းသား နှင့် မူဆလင်(ခိုးဝင်သူ) လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုအား ညီတူညီမျှ အကူအညီပေးနေပါသည် ဟု ကြားကောင်းအောင် အသံကောင်းဟစ် နေကြသော်လည်း တကယ်တမ်းလက်တွေ့တွင်မူ ရခိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကလက်ခံရရှိသည့် အကူအညီမှာ ထောက်ပံ့ကူညီမှု စုစုပေါင်း၏ ငါးရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုနိုင် ကြောင်း စောင့်ကြည့်အကဲခတ်သူတစ်ဦးက Coral Arakan အားပြောကြားသည်။
This entry was posted on February 19, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← West silence fuels killing of Muslims in Myanmar: Iran MP
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမွတ်စလင်ကျောင်းသားများနီးစပ်ရာ တက္ကသိုလ်၊ ကော်လိပ်သို့တက်ရောက်ပညာသင် ကြားခွင့်ပြုရန်NDPD ပါတီမှဝန်ကြီးထံတင်ပြသော စာတမ်း … →